Ogige Industrylọ Ọrụ - SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) Co., Ltd.
Ogige Ulo Oru nke Shanghai
Ogige ulo oru Hefei
Ogige Industrylọ Ọrụ Shijiazhuang
Ogige Industrylọ Ọrụ Shenyang
Ogige Industrylọ Ọrụ Zhejiang
Dabere na ntụgharị ahịa ahịa, Shanghai Kaiquan ahọrọla No.1 maka afọ iri na ise na ụlọ ọrụ mgbapụta nke China yana na 2019 ọnụ ahịa otu a bụ 850 nde USD. Site n'enyemaka nke usoro ERP & CRM, KAIQUAN na-enye azịza ọkachamara maka ndị ahịa niile na ahịa ahịa. Ọzọkwa, KAIQUAN eguzobewo netwọk ọrụ mba na ụlọ ọrụ alaka ahịa 32 na ụlọ ọrụ 361. Ducingmepụta ngwaahịa asọmpi na nke a pụrụ ịdabere na ya maka afọ ojuju ndị ahịa bụ ihe kacha mkpa Kaiquan.
Isi ngwaahịa: Split casing pump, Vetical Mixed flowing pump, Vetikal Axial na-agbapụta mgbapụta, Boiler feed water pump, Mmiri mgbanaka agụụ mgbapụta, Vetikal multistage mgbapụta, Water booster mgbapụta, Control panel & system, Circulation water pump, Condensate Pump, all types pump pump used. ụlọ ọrụ ihe ọkụkụ nuklia.
Adreesị: Nke 4255, Caoan Road, Jiading District, Shanghai, China
Na 2008, Kaiquan Group zụtara Hefei Sanyi Motor & Electrical Pump Co., Ltd. gbanwere aha ya na Hefei Kaiquan Motor & Electrical Pump Co., Ltd. Ọ na-ekpuchi mkpokọta mpaghara nke 270,000 square mita & ụlọ nke 230,000 square mita maka mmepụta . Ugbu a, ọ nwere karịa ndị ọrụ 1500 gụnyere 278 engineer & 56 engineer engineer. Enwere ule dị elu, nyocha na imepụta ụlọ ọrụ nke ụgbọ ala na-akụda ala na ebe a.
Main ngwaahịa: Mgbaze submersible, Submersible pump, Sewage pump, Fire pumping pump, Submersible Axial flowing pump, Submersible Mixed flowing pump, Submersible Packing system, Control panel, Split case pump, Single stage pump and so on.
Adreesị: Nke 611, Tianshui Road, Hefei Xinzhan District, Hefei obodo, Anhui Province, China
Main ngwaahịa: All ụdị slurry mgbapụta eji maka Minging, Kol mmepụta, Ike osisi, Osimiri dredging, Alumina na ndị ọzọ na ụlọ ọrụ.
Adreesị: Mpaghara ahia nke mpaghara ZHENGDING, Mpaghara Hebei, China
Shengyang Kaiquan nwere zuru oke mmepụta akụrụngwa & ule ụlọ ọrụ, magburu onwe nhazi ndutịm, nlezianya management & nzukọ nke dabere na usoro na akwụkwọ nke IS09001 mba usoro ekwe nkwa inye mma ngwaahịa maka zuru ụwa ọnụ ahịa.
Main ngwaahịa: API610 Chemical usoro mgbapụta izute chọrọ nke API6107 ANSI B73.1M na IS02858
Adreesị: Nke 4, 26Nke Zọ, Shenyang ET District, obodo Shenyang, Liaoning Province, China
Main Ngwaahịa: Single ogbo mgbapụta, Inline mgbapụta, End mmiri mgbapụta
Adreesị: Mpaghara Ọrụ Ọwụwa Anyanwụ Europe, Yongjia County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China